ओछ्यान भिजेको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दु | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना ओछ्यान भिजेको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स
ओछ्यान भिजेको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स
आज हामी बेडवेटिंगको बिरूद्ध प्रार्थना बिन्दुको साथ व्यवहार गर्ने छौं। यो विषय जस्तोसुकै लाग्नलाग्दो कुरा के हो भने, धेरै मानिसहरूले यस भूतलाई लुकाउन खोजिरहेका छन्। हाम्रो जीवनमा, केहि युगहरूमा, हामी ओछ्यानमा ओछ्यानको आशा गरिन्छ, तर जब हामी केही उमेर पुग्न थाल्छौं, र हामी अझै पनि ओछ्यान ओछ्यानमा जान्छौं, तब यो लाज र अपमानको कुरा हुन्छ। एक भूतले एक जना मानिस लाई लाजमा पार्छ। कसरी एक वयस्क वयस्क अझै सुत्ने हुनेछ कि यो वास्तवमा लाज को एक प्रदर्शन हो। वयस्कको रूपमा ओछ्याउने डरले त्यस्तो व्यक्तिलाई निद्रा लाग्नेछैन।
परमेश्वर आफ्ना जनहरूलाई ओछ्यानमा भिज्न लगाउने लाजमर्दो भूतबाट छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ जुन उनीहरूलाई सताइदैछ। यो अझै राम्रो हुन्छ जब तपाईं आफ्नो अभिभावकको घरमा बस्नुहुन्छ तर जब स्कूल जाने बेला आउँछ, र तपाईं दिनदिनै घर फर्कनुहुन्न, वा यो तपाईं राष्ट्रिय युवा सेवा कर्पको लागि जाने समय हो, त्यो त्यस्तै हो। तपाईलाई थाहा हुनेछ कि यो वास्तविक लडाई हो। भजनसंग्रह २:25:२० को पुस्तक मेरो प्राण बचाउनुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, मलाई निराश नपार्नुहोस्। म तपाईंमा भरोसा राख्छु। भगवानले ओछ्यानको बेइज्जतीबाट मानिसलाई छुटकारा दिन लाग्नु भएको छ कि भूतले सताएको आजको प्रार्थनाको कारण पवित्र आत्माको आगोले तिमीलाई पक्रनेछ।
परमेश्वरले यस प्रार्थना गाईडलाई निर्देशन दिनुभयो, र जब भगवानले त्यस्तो केही निर्देशन दिनुहुन्छ, यसको मतलब परमेश्वर चमत्कारहरू गर्न सेट हुनुभयो। मलाई ध्यान छैन कि तपाईं कति वर्ष यो एक्लै लड्दै हुनुहुन्छ; मलाई के थाहा छ कि हामीसँग एक महान योद्धा छ जो सियोनमा बस्छौं; उसले तिम्रो ठाउँमा लडाईं ल्याउनेछ र तिम्रो लागि लडाईं जित्न सक्छ। त्यहाँ एक बिरामी छ जो सियोनको महान राजक हो। उहाँ आज तपाईंको दाहिने हातको बलले तपाईंको कमजोरीहरू निको पार्नुहुनेछ। तपाईंको निन्दा हटाइनेछ, र तपाईं येशूको नाममा स्वतन्त्र हुनेछ।
हे प्रभु येशू, आज म यस दुष्ट भूतको खबर दिन तपाईं अघि आउँदैछु जसले मलाई कहिलेकाहिँ सताइरहेछ अहिले, मैले यसलाई जित्नको निम्ति हर सम्भव प्रयास गरेको छु, तर यो असन्तुष्ट साबित भएको छ। म तपाईं मद्दत बिरुवाको भूत मा तिम्रो सहयोगको लागि प्रार्थना, तपाईं मलाई येशूको नाम मा आफ्नो शक्ति द्वारा यसलाई जित्न मद्दत गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु।
प्रभु, म ओछ्यानको भिजेको हरेक आत्मा र भूतको बिरूद्धमा आउँछु जुन मेरो जीवनलाई अन्धकारको राज्यबाट मेरो बदनाम गर्न खटाइएको छ। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूको नाममा त्यस्ता प्रेतहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ।
मेरो बुबाको घरका सबै शक्तिहरू जसले मलाई छोडिदिन इन्कार गरे, मेरो वंशका सबै भूतले मलाई सँधै लाजमा पार्ने कसम खाए, म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु तिनीहरू ध्वंश हुन्छन्। प्रत्येक अदृष्य आत्मा, चाहे त्यो मेरो स्थानमा बदनाम गर्न खटाइएको स्थलीय आत्मा वा समुद्री आत्मामा, म येशूका नाममा आगो लगाऊन् भनेर म प्रार्थना गर्दछु।
प्रभु येशू, मेरो जीवनमा काम को दुश्मन को हरेक कष्ट, म आदेश दिन्छु कि ती येशूको नाममा आगो लाग्छ। मलाई बदनाम गर्न खटाइएको हरेक पुरानो शक्ति, मेरो परिवारमा प्रत्येक शक्तिशाली पुरुष र महिला जसले मेरो जीवनलाई सताइरहेका छन्, म बिन्ती गर्दछु कि करारको सन्दूक अघि अजि destroyed्गरलाई नष्ट गरिए जस्तै येशूको नाममा नष्ट हुन दिनुहोस्।
प्रत्येक दुष्ट राक्षस र रोगहरूले मलाई शत्रुहरूले कुप्रकाँप गरेको छ र हरेक पल्ट सुत्नको लागि आँखा बन्द गर्दा मलाई ओछ्यानमा ओछ्याउँछु, म भेडाहरूको रगतले त्यस्तो कष्टहरूलाई नष्ट गर्दछु भनेर प्रार्थना गर्दछु। धर्मशास्त्र भन्छ दु: ख दोस्रो पटक उठ्दैन, लाज को हरेक राक्षसी पीडा, म आदेश दिन्छु कि तिनीहरूले येशूको नाममा आगो लिन शुरू।
म मेरो जीवनमा खराब कुरा गर्ने हरेक दुष्ट जिब्रोको विनाशको लागि आह्वान गर्दछु, मेरो अस्तित्वमा खराब ठान्ने हरेक दुष्ट मुख, म आदेश दिन्छु कि ती येशूको नाममा नष्ट गरियो। प्रभु उठ्नुहोस् र तपाईका शत्रुहरूलाई तितरबितर पार्नुहोस्, मलाई बाँध्न भेला भएका प्रत्येक पुरुष र महिलालाई येशूको नाममा शर्ममा पार्नुहोस्।
मेरो जीवन मा क्रल छ कि बदनाम को सबै सर्प, म तिनीहरूले येशूको नाम मा पवित्र आत्माको आगो पक्राऊ कि प्रार्थना। हे प्रभु, म तपाईं येशूका नाममा मेरो लाज महिमामा रूपान्तरण भनेर प्रार्थना गर्दछु।
धर्मशास्त्र भन्छ, किनकि मलाई तपाईको तर्फका विचारहरू थाहा छन्, तिनीहरू तपाईको राम्रो विचारको हो खराब होइन तपाईलाई अपेक्षित अन्त दिनका लागि। म प्रार्थना गर्दछु कि मेरो जीवनमा सबै जुन तपाईंको लागि मेरो योजना कहिल्यै हुँदैन; म प्रार्थना गर्छु कि ती येशूका नाममा हटाइनेछन्।
म लाज र बदनामको अजि .्गरमा परमेश्वरको बदला लिन्छु जुन अन्धकारको राज्यबाट मेरो जीवनको लागि खटाइएको छ। म प्रार्थना गर्दछ कि त्यस्तो अजि dra्गेले येशूको नाममा आगो ल्यायो। तपाईंको वचनले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म लाजमा पर्नेछैन, म आदेश दिन्छु कि हरेक शक्तिले मलाई लाजमा पार्छ, सर्वशक्तिमान् परमेश्वरको आगोले तिनीहरूलाई येशूको नाउँमा खरानी बनाई दियोस्।
हे ए भूत, जसले मलाई ओछ्यानमा सुताउँछ, परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, यो लेखिएको छ कि म प्रभुको लागि चिन्ह र आश्चर्यको कामको लागि हुँ, त्यसैले म येशूको नाममा तपाईं ओछ्यानमा राख्ने भूतको बिरूद्ध आउँनुभयो। धर्मशास्त्रले भन्छ कि मेरो बुबाले नरोपेको प्रत्येक रूख उखेलिनेछ। म आदेश दिन्छु कि परमेश्वरको आगोले यस समस्याको जडमा जान्छ र येशूको नाममा यसलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्दछ।
धर्मशास्त्रले भन्छ, एउटा कुरा भन, अनि त्यो स्थापित हुनेछ। म भूतबाट मुक्त छु भनेर घोषणा गर्दछु जसको कारणले गर्दा येशूको नाममा मलाई ओछ्यानमा ओछ्याउँछ। धर्मशास्त्रले भन्छ कि उसले छोरा स्वतन्त्र पार्छ स्वतन्त्र छ। वास्तवमा, म तपाईं को नाम लिएर येशूको नाममा ओछ्याउने भूतबाट मुक्त छु।
ओछ्याउने बिरुद्द प्रार्थना
लाज विरुद्ध प्रार्थना
अघिल्लो लेखमापछाडि पछाडि प्रार्थना अंक
अर्को लेखमाविश्वासघातको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स
हविल्लाह मोशेरी जुन 29, 20216मा: 36 बिहान
यो प्रार्थना बिन्दु मेरो लागि ठूलो आशिष हो ... यसका सबै चीजहरू मेरो लागि मात्र हुन्… .. म तपाईंलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु …… हाम्रा परमेश्वर कहिल्यै सुत्नुहुन्न किनकि उहाँ मेरो निम्ति यो उपलब्ध गराउनुभएको हो …… .. म तिमीलाई धन्यवाद दिन सक्दिन पर्याप्त… .. म येशू शक्तिशाली नाममा तपाईं र तपाईंको सेवकाईमा हरेक दिन ताजा अभिषेकको लागि प्रार्थना गर्दछ !!!!!!! कृपया तपाईको दैनिक प्रार्थनामा मलाई बिर्सनु हुन्न ... र म यकिन छु कि हाम्रा ईश्वरले मलाई येशुको अतुलनीय शक्तिशाली नाममा मलाई देख्न भन्दा बढी हुनुहुन्छ !!!!! AMEN !!